Iphupha malunga nokuQala ukuFumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ngokuQala. Uninzi lwabahlalutyi bagqiba kwelokuba amaphupha angabonisa ukuba injani impilo yomzimba okanye yengqondo. Kwesi sikhokelo kutoliko lwamaphupha ungafunda ngakumbi ngesi sihloko.
Yonke into yokuqala inzima, njengoko isitsho intetho. Ngapha koko, sihlala sinengxaki yokufunda into entsha okanye ukufumana indlela kwindawo engaqhelekanga. Kodwa nje ukuba woyise ubunzima bokuqala, uya kuba nebhongo ngezakhono ozifumeneyo kwaye wonwabe ngamathuba amatsha. Kuba kwangaxeshanye ukuqala kwenqanaba elitsha lobomi kunamathuba amaninzi kunye neembono: "Kukho umlingo kuzo zonke iziqalo" Njengoko umbongo kaHermann Hesse ubizwa njalo.
Ukuba umntu uphupha ngesiqalo, mhlawumbi kukho into entsha ebalindeleyo, umsebenzi omtsha okanye umtshato. Ngokunokwenzeka umphuphi ucinga ukuba uyahamba kwaye uya kuba nendlela yokuphila eyahluke ngokupheleleyo. Ukutolikwa kwamaphupha kubalulekile ukuba umisele kweliphi icala umphuphi onesibindi kwisiqalo esitsha kunye nethemba analo ngalo.
1 Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolika ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolika ngokubanzi
Ngokutolikwa kwephupha, kunokubakho into engaqhelekanga neyoyikisayo malunga nophawu lwephupha 'ukuqala'. Kanye njengokuba usuku olutsha luqala ezinzulwini zobusuku, ngexesha lobumnyama obukhulu, ukuqala kwento entsha ebomini kuhlala kungacacanga. Ukuphupha usenokuzibuza ukuba loluphi utshintsho olunokuzisa iimeko ezintsha.
Ke, iphupha elo linokubonisa ubunzima ekunokwenzeka ukuba ubujwayele. Isimboli yephupha "ukuqala" nayo ingalumkisa malunga izinto ezingalindelekanga ezingathandekiyo. Mhlawumbi iphupha livakalelwa ngathi yinto entsha engacwangciswanga kunokuba ibe yinto engalunganga. Kutoliko lamaphupha, iindaba ezimbi zingabhengezwa nasephupheni.
Kwelinye icala, isiqalo sihlala silandelwa sisiphelo. Oku kunokuthetha ukuvalelisa okubuhlungu, kodwa kunye nethuba lokwenza ngcono kakhulu kunangaphambili. Umzekelo, ukuqala kosuku ekuchazeni iphupha luphawu lwephupha lwethemba elitsha. amathemba obomi kunye nolwazi olutsha. Ephupheni, umntu ophuphayo ukhangela izisombululo ezitsha zokwanelisa ngokufanelekileyo iimeko ezaziwayo.
Umnyango wendlu okanye indlu unokutolika njengesiqalo kwaye uhlala ubhekisa kumathuba amatsha.
Esona siqalo sibaluleke ngokungathandabuzekiyo kuzalwa kuba naye buqala ubomi obutsha. Ngokwenkcazo yamaphupha, izimo zengqondo ezintsha kunye nobuchule bubonakaliswa kwisimboli yamaphupha. Umphuphi unokufuna ukuqonda izicwangciso kunye neenjongo ezithile zobuqu. Isiqalo yindawo apho unokujonga ngasemva kwaye uzobe izigqibo ezifanelekileyo ngekamva.
Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yamaphupha, ukuqala kuhlala kunamandla okomfuziselo. Yiyo loo nto sibhiyozela ukuqala konyaka ngomboniso odlamkileyo onengxolo.
Ngophawu lwephupha, i-subconscious itsalela ingqalelo kwinto yokuba iphupha limiselwe ixesha elizayo elitsha okulindelweyo namathemba. Kodwa ephupheni uyaqonda ukuba kuya kuba nzima kuwe ukufezekisa ukukhula kunye nokuhlaziywa ngokomoya.
Isimboli yephupha 'ukuqala' ikwangumqondiso we isigaba sokuyila yobomi, ebonakaliswa ngaphezulu kwako konke ekuzalweni. Umphuphi ufumana ephupheni isicelo sokungazi ukuqala ngokutsha kwaye asebenzise ngcono amathuba anokubakho.
Ngokwenkcazo yamaphupha, isifingo sifanekisela ukuqala kosuku. Ngokufanelekileyo, ukuhamba kwexesha kunye nesidingo somphuphi ukuba siyazi le nto. Isiqalo nesiphelo zenza umjikelo ongunaphakade apho i-psyche kufuneka ilungelelanise.
Uphawu lwephupha «ukuqala» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "ukuqala" kuthetha ukuvuka ngokomoya, ulwazi nokukhanyiselwa. Ephupheni uvakalelo olunzulu lwethemba lwenzeka kulwazi kunye nokukhula kwengqondo.